Maninona No Betsaka Miaraka Maty Ireo Lalomena Ao Namibia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 2:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, English, Italiano, 繁體中文, 日本語, Français
Pikantsary avy amin'ny Youtube-n'ny BBC ahitàana ireo lalomena maty ao Namibia.
Ny 10 Oktobra teo, nambaran'ny ministera misahana ny Tontolo Iainana ao Namibia ny nahitàna ireo fatinà lalomena tao amin'ny valan-javaboaharim-pirenena any Bwabwata, avaratra atsinanan'ny firenena. Fatiantoka 8 isanjato amin'ny isan'ireo lalomena ao amin'ilay valan-javaboaharim-pirenena ity faharingànana ity. Ankoatra izay, ny fifangaroam-piaina sy ny fifandanjàna voajahanary misy ao aminy no herin'ny fizahantanin'ilay firenana. Araka ireo angon-drakitra azo raisina, manome ny 16% amin'ny harinkarena faobe ary mampiasa 17,7% amin'ny asa manontolo ny fizahantany .
Nahasarika ny sain'ny mpilaza vaovao sy ireo mpampiasa tambajotra sosialy ny filazàna faharinganana tahaka izany. Nanoratra tao amin'ny bilaoginy “Sciency Thoughts” i Joe Bauwens, izay miasa ao anatin'ny fizahantany mifototra amin'ny resaka biby, ny fitrandrahana akora mineraly, ny fampandrosoana, ny fiarovana, ny fanabeazana ary ny simia momba ny tontolo iainana.
Voamarik'ireo tomponandraikitra ao amin'ny Valan-javaboaharim-pirenena ao Bwabwata, avaratra atsinanan'i Namibia, ny fitomboana tafahoatran'ny fatranà Anthrax ka nahafaty lalomena an-jatony tamin'ny herinandro lasa. Nalefa nanaovana fitsirihana ny ampahan-tsela nalaina avy tamin'ireo biby, ary tsy mbola fantatra aloha hatreto ny anton'ilay aretina, saingy tsy misy na iray aza aretina hafa fantatra ho afaka mamono lalomena marobe amin'ny fomba haingana be tahàka izao. Misy ihany koa izao ny ahiahy hoe mety efa nifindra amin'ireo biby hafa ao anatin'ilay valan-javaboahary ilay aretina, indrindra fa ireo voay izay mpihinana fatim-biby any anatiny na manamorona ny renirano.
Faritan'ny tranonkalam-baovao “Arc Info” ny fomba fipetrak'ireo fatim-biby:
An-jatony ireo lalomena hita maty tao amin'ny renirano iray ao anatin'ny valan-javaboaharim-pirenen'i Namibia. Mety ho ny aretin'ny arina no niteraka ity faharinganana ity, hoy ny nambaran'ny ministera misahana ny tontolo iainana tamin'ny Alatsinainy teo.
Amin'ireo sary navoakan'ireo gazety ao an-toerana, midaboka amin'ny lamosiny ireo fatinà lalomena, na ny lohany no mivoaka ety ambonin'ny rano, tao amin'ny valan-javaboaharin'i Bwabwata (avaratra-atsinanana). “Maherin'ny zato ireo lalomena maty tamin'ny herinandro lasa. Tsy fantatra izay anton'ireo fahafatesana saingy ahiahiana ho ny aretin'ny arina”, hoy ny ministra namibiana misahana ny tontolo iainana, Pohamba Shifeta.
Mihevitra i Stéphanie Schmidt, mpanao gazety siantifika avy amin'ny tranonkala “trustmyscience.com” fa mety havesatra kokoa ny fiantraikany raha tena aretin'ny arina tokoa, satria karazany maro hafa no ho tratra, toy izany koa ireo mponina amin'ilay faritry ny vala fitahirizana biby:
Raha voamarina fa tena ny aretin'ny arina tokoa no mety niteraka ny fahafatesan'ireo lalomena an-jatony ireo (hita midaraboka amin'ny lamosiny ary anaty renirano ), dia mazava ho azy fa tsy izy ireo irery no mety ho voan'io aretina io. Toa maro koa ireo ombin-drano hita faty. Fanampin'izay, ireo voay izay mihinana ny fatin'ireo lalomena dia mety koa ho voan'ireo bakteria Bacillus anthracis.
Ny tazo ateraky ny aretin'ny arina no ahiahian'ireo mponina eny an-toerana ho tomponandraikitra amin'ny fahafatesan'ireo olona 300 tamin'ny 2004 (taorian'ny nisotroan'izy ireo rano voaloto), ary koa loza iray tsy dia henjana kokoa noho io, nitranga tamin'ny 2010. « Toejavatra efa hitanay tany aloha izao. Efa nitranga tany Zambia, ary mitranga, indrindra fa rehefa tafidina ambany be ny haavon'ny rano », hoy ny fanazavàn'i Colgar Sikopo, talen'ireo valan-javaboahary sy ny fitantanana ny resaka biby ao Namibia.
Stéphanie Schmidt manampy hoe:
Ankoatry ny valanaretina tazo ateraky ny aretin'ny arina, vao haingana ihany koa ireo mpahay siansa no nanao fanadihadiana momba ny soritr'aretina iray tsy fanta-piaviana sy mandray roa amin'ilay bibin'aretina, nifandray tamin'ny fahafatesan'ireo rajako, babakoto ary elefanta.
Io soritra io no mety ho tomponandraikitra akaiky tamin'ny 40%-n'ny fahafatesan'ireo biby tao amin'ny valan-javaboaharim-pirenena tao Taï, Côte d’Ivoire, nandritra ny fotoana nanaovana ilay fanadihadiana nataon'ireo mpahay siansa. Kanefa, tsy misy porofo mlaza fa io soritra hafakely io no loharano nitondra tamin'ny fahafatesan'ireo lalomena. Antenain'ireo mpitantana ilay vala ny hanalaviran'ity farany azy ireo, mba hanakanana ny fipariahan'ilay bakteria amin'ireo karazana biby hafa mihenjy ao amin'ilay faritra.
Amkoatra ireo biby mihenjy, misy eo amin'ny 5.500 eo ny olona miaina ao anatin'ny faritr'ilay valan-javaboaharim-pirenena ao Bwabwata. Amin'izao fotoana izao, ampitandremin'ireo manampahefana izy ireo mba ho mailo amin'ireo faritra voadona ary indrindra mba tsy hihinana ny nofon'ireo lalomena. « Tena torohevitra omenay ny tsy hihinanana io hena io. Efa manao izay tratra izahay mandoro ireo faty tsirairay mba hisorohana ny fipariahan'ilay aretina, nefa koa mba hiantohana ny tsy hisian'ny olona, na iray aza, ho tonga eny amin'ireny biby ireny ka hanararaotra ny henan'izy ireny», hoy ny Sikopo New Era.
Bakteria iray, Bacillus anthracis, no miteraka ny aretin'ny arina, izay manana vihy mety ho velona mandritra ny taona marobe, mety ho ampolo taona maro mihitsy eny anatin'ny natiora, miandry izay hiteleman'ny olona azy, na ireo biby hafa mampinono, sy voro-manidina sasantsasany.
Avoitran'ny tranonkala “futura-sciences.com” fa mandravarava ihany koa izy io any amin'ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ankoatra an'i Afrika atsimon'i Sahel, Azia, Eoropa Atsimo, Amerika sy Aostralia.